Somalia oo Faah Faahin Ka Bixisay Go’aanka Ay Ka Qaadatay Xiisada Khaliijka. – Hornafrik Media Network
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa markii u horeysay faah faahin ka bixisay go’aankii dhex dhexaadnimada ahaa ee dowladdu ka qaadatay xiisada khaliijka iyo habka loo maray.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda C/qaadir Xaaji Axmed Kheyr oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in markii la qaadanayay go’aankaas dhinac walba laga eegay, isla markaana uu ahaa mid laga fiirsaday.
“Mar kasta markaad qaadaneysid go’aan siyaasadda Arrimaha dibadda waa in aad dhinac walba ka fiirisaa, Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaarahuna markii go’aankan ay qaadanayeen maku deg degin, wuxuu ahaa go’aan ay ka fiirsadeen”ayuu yiri Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in go’aanka dowladda la soo saaray saddex maalin kaddib markii dowladaha khaliijka khilaafkooda soo baxay, isagoo xusay in wada tashi lagala sameeyay arrintan, Khabiiro Siyaasadeed, Xildhibaano iyo qaar ka mid ah Madaxda Maamul Goboleedyada inta aan go’aanka la gaarin.
“Waa run Imaaraadka iyo Sacuudiga xiriiro soo jireen ayaa nagala dhaxeeya iyo is weydaarsi ganacsi, Soomaali badan ayaa ku nool oo Ganacsi ku leh, laakiin ma ahan in Soomaaliya la yiraahdo go’aankan gaara ama waa naga soo horjeedaan, taas qof dhihi karta ma jirto Soomaaliya” ayuu yiri Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda.
“Go’aanka Soomaaliya gaartay ma ahan mid dowlad looga soo horjeedo ama dowlad kale lagu durayo, Soomaaliya waxay qaadatay go’aan dan u ah umadda, sharafta iyo dowladnimadda Soomaaliya”ayuu yiri.
Maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa dhowaan soo saaray qoraalo ay ku naqdinayaan go’aanka dhex dhexaadnimada ee dowladda Soomaaliya ka qaadatay xiisada Khaliijka, iyagoo sheegay in aan lagala tashan markii dowladda Soomaaliya ay go’aankan qaadaneysay.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligan wajahaya cadaadis siyaasadeed oo uga imaanaya Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyagoo adeegsanaya maamul goboleedyada dalka, si dowladda culeys loogu saaro inay Qatar xiriirka u jarto.
Askar ka socota Midowga Yurub oo soo gaaray Muqdisho